Salenala luz las especificaciones del HTC One X9 | Androidsis
HTC သည်အပြောင်းအလဲကာလတွင်ရှိနေပြီး၎င်းကို၎င်း၏နောင်လာမည့်ကိရိယာများတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ မကောင်းသောနှစ်ပြီးနောက်ကုမ္ပဏီသည်အနာဂတ်ထုတ်ကုန်အသစ်များအတွက်မိုဘိုင်းကဏ္inတွင်၎င်း၏မဟာဗျူဟာကိုပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဆိုးရွားသည့်အချိန်ပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာသည့်ပထမ ဦး ဆုံးကိရိယာမှာ HTC One ကို A9.
ဒီစမတ်ဖုန်းအသစ်ဟာအက်ပဲလ်ရဲ့ iPhone6နဲ့ဆင်တူတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်မှုတွေများလာတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤစမတ်ဖုန်းသည်အသုံးပြုသူများကိုဖမ်းယူရန်နှင့်စားသုံးသူယုံကြည်မှုကိုတရုတ်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီသို့ပြန်ပို့ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ဆိုးသောအချက်ကိုကျော်လွှားရန်လိုသည်။ တစ်ခုက A9 တစ်ခုပါ.
ကောင်းပြီ၊ ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ပရီမီယံအလယ်အလတ်တန်းစားစမတ်ဖုန်းကိုထုတ်လုပ်ပြီးနောက် Android စျေးကွက်၏အမြင့်ဆုံးအသုံးပြုသူများကိုဖမ်းယူရန်ရည်ရွယ်သည်။ မန်နေဂျာသည် HTC One X9၊ ကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်ထင်ရှားသောအချက်အချာဖြစ်သည်။ ဒီစက်မှာဈေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးသတ်မှတ်ချက်အချို့ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်၊ ၁၀-core ပရိုဆက်ဆာကိုတောင်မြင်နိုင်တယ်၊
တရုတ် TENAA မှပေါက်ကြားမှုကြောင့် terminal ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ အဆိုပါ terminal ကို၎င်း၏အစ်ကို A9 နှင့်အတူအမည်ရှိပရီမီယံအလယ်အလတ်အကွာအဝေးအသစ်တွင်တည်ရှိပြီးလိမ့်မည်။ ဤယိုစိမ့်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သတ်မှတ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်နောက်ထပ်ထပ်မံမထည့်ဘဲ HTC terminal ၏အနာဂတ်အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ကြစို့။
ဒီကိရိယာမှာရှိလိမ့်မယ် ၅'၂ လက်မမျက်နှာပြင် FullHD resolution ပါသော IPS ။ အတွင်းပိုင်းကျွန်တော်တစ် ဦး ရှာပါ ရှစ် core ကိုပရိုဆက်ဆာနာရီ၏အမြန်နှုန်းသည် ၂.၂ GHz အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီးထုတ်လုပ်သူကိုမူမသိရှိရသေးပါ2GB RAM မှတ်ဉာဏ် သိုလှောင်မှုပမာဏ 16 GB နှင့် microSD slot မှတစ်ဆင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်။
အခြားအရေးကြီးသောအသေးစိတ်အချက်များမပါရှိပါက၎င်းသည်ဓာတ်ပုံအပိုင်း၌၎င်း၏အဓိကနောက်ကင်မရာသည်စက်၏နောက်ဖက်တွင်မည်သို့မည်ပုံရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ၅ megapixels ရှေ့ကင်မရာက5MP ပါ။ အရွယ်အစားမှာ ၁၇၄ ဂရမ်ရှိပြီး ၁၅၃.၂ မီလီမီတာ x ၇၅.၉ မီလီမီတာ x ၇.၉၉ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ယိုစိမ့်သောအခြားအင်္ဂါရပ်တစ်ခုစွမ်းရည်ရပါလိမ့်မယ်၎င်း၏ဘက်ထရီဖြစ်ခဲ့သည် 3.000 mAh ဘက်ထရီ.
ယခုအချိန်တွင်၎င်း၏ရရှိနိုင်မှုနှင့်ရောင်းချမှုစျေးနှုန်းကိုမသိရှိရသေးပါ။ ထို့ကြောင့် HTC ၏အနာဂတ် terminal အကြောင်းအသေးစိတ်သိရန်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းရမည်။ တဖန်သင်တို့က, အနာဂတ် HTC One X9 နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်သနည်း ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » HTC One X9 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါ်လာသည်